Semalt: WordPress Plugins Kubatsira
WordPress plugins ndiyo inofadza uye inoshanda inotarisira chero webmaster kana blogger. Kuburikidza ne-plugin, vateereri vewebhu uye vavakadzi vanogona nyore kuwedzera kushanda nekushandurudza kune imwe nzvimbo kunze kwezvakagadzirwa zvayo zvakaratidzwa pamapeji ose. Kunyangwe iwe unofanirwa kuumba fomu yekunyoresa iri nyore, mutambo wemavhidhiyo, kana spam blockers uye zvigadziro zvinogadzirisa, mapaji aya inzira nyore uye ine simba yekuita kuti zvinhu zviitwe.
Pano Ross Bhabheri, nyanzvi yepamusoro Semalt , yakurukura 10 zvakanakisisa zveShokoPress plugins.
1 - σκρουτζ κρεμες προσωπου. Ma Plugins ari nyore kushandisa
ShokoPress plugins rakashandiswa kushandisa uye rine intuitive interface inoita kuti ive nechinangwa kune marudzi ose emawebsite. Iwe unogona kuwedzera nyore blog mabhuku, mifananidzo, uye mapeji anobatanidza kune webhusaiti yako uye izvi zvose zviri nyore kuita, kutora maminetsi mashomanana chete uye kuderedza nguva yekufambisa.
2. Zviri nyore Kupinda kubva kumakamuri ose
Chikamu chakanakisisa ndechekuti WordPress plugins inogona kuwanikwa kubva pane chero chigadzirwa. Hazvina mhosva kuti uri kushandisa laptop kana smartphone, iwe unogona nyore kuchinja kana kuisa / kuisa purogivha uye kuwana webhusaiti yako kana yakabatana neIndaneti.
3. Hapana chidimbu chekushandurwa kwe HTML
Kana wapedza kuisa zvakakodzera WordPress plugins, haudi chero HTML editor kana FTP software kuti zvinhu zviitike. Aya mapulagi akafanana zvakanakira mawebsite emafambiro uye asingasimbisi, uye haufaniri kuchinja ma code HTML kana waisa pirinji.
4. Inowirirana nevanjini
ShokoPress plugins rinowirirana nemichina yekutsvaga zvikuru Google ne Yahoo uye inoita kuti zvive nyore kwauri kuti uvandudze kushanda kwewebsite yako. Uyezve, mapeji ose, mifananidzo, zvinyorwa, zvinyorwa uye tsanangudzo dzinoiswa indexed kutsvaga injini dzekutsvaga pamusana pemapulagi aya sezvo vachikubatsira kukurisa nzvimbo yako nenzira iri nani.
5. Chengetedza webhusaiti uye shandura kutarisa kwayo
Vazhinji vema webmasters nevablogiki havana ruzivo rwekuti WordPress plugin inogona kuvabatsira kuchinja shanduro dzemasayiti avo. Zvinoreva kuti iwe unogona kushandisa plugins yakawanda sezvinobvira kune zvese zvekare uye zvisingawanikwi mawebsite.
6. Zvigadziriswa zvirongwa
Chimwe chezvinhu zvinokosha zvevashandisi vemazuva ano ndechekuita. Isu tose tinotarisa zvikwata zvinotitumira kuti tive newemasayithi akazara. Shoko rinonzi WordPress plugins rinoita kuti zvikwanise kwatiri uye tinoshandisa vashandisi vakawanda kune mabhuku edu uye mapeji ewebhu.
7. Kugadzirira kushandisa
Ichokwadi kuti kubhonyora pachako ibasa rakanyanyisa uye iwe haugoni kukura yako pachake plugins. Mumamiriro ezvinhu akadaro, unogona nyore nyore kuisa WordPress plugins uye kutanga nehutano hwako hwewebhu. Vane maitiro akasiyana uye mabasa, saka vanoita kuti basa renyu rive nyore uye rinokurumidza.
8. Kuvandudza kushanda nekugadzirisa zvakakodzera
Sezvo pane pane zvakasiyana-siyana zveShokoPress plugins, zviri nyore kune ani zvake kuti awedzere kushanda kwepaiti kana bhurogi nehutano hwakanaka hwekusarudza. Iwe unogona kuwedzera sehuwandu kana semapulaji maduku kune yako saiti sezvinobvira uye unoita kuti ione sangano uye iri nani kudarika kare.
9. Plugins anobatsira kukura bhizinesi rako
Ichokwadi zvachose kuti WordPress plugins inobatsira kukura bhizinesi rako. Kana nzvimbo yako yakanyatsogadzirirwa uye iri kuitika, zviri pachena kuti vashanyi vazhinji vanowedzera kuva vatenzi vanofara.
10. Possibility of multiple users
Semutongi, unogona kuwedzera sevashandisi vakawanda kuWebsitePress website sezvaunoda. Iwe unogona kuvapa mabasa akasiyana uye unovapa zvakasiyana-siyana zviremera uchishandisa WordPress plugins.